Ucwaningo Luveza Ukuthi Inkohlakalo Idla Lubi Ngaphansi Kobuholi buka-Ramaphosa - Gagasi World
By: Lindelani Mbatha
Ucwaningo olwenziwe yi-Afrobarometer lathulwa yi-Institute for Justice and Reconciliation seluveze ukuthi inkohlakalo kanye nokukhwabanisa kuphezulu kakhulu ngaphansi kobuholi bukaMengameli uCyril Ramaphosa.
Lolucwaningo oluthulwe yilenhlangano ekuqaleni kwesonto, luveza ukuthi u64% wezakhamuzi kuleli zibona sengathi inkohlakalo yenyuke kakhulu, ikakhulukazi kuhulumeni kanye nezinkampani zakhe amaState Owned entities.
Umengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethatha izintambo zokuhola iNingizimu Africa, wakubeka kwacaca ukuthi akazwani nenkohlakalo, futhi bazoyikhotha imbenge yomile labo abanesandla esilula.
Waphinde wachaza ubuholi bukalowo owayengumengameli wezwe uJacob Zuma njengobugcwele inkohlakalo, futhi nobumoshe isikhathi, okuphindisele iningizimu africa emuva.
Ucwaningo lwe-Afrobarometre luthole ukuthi amalunga omphakathi angaphezu kuka-64% athi izikhulu zonke ezisehhovisini likamengameli zingamathe nolimi nenkohlakalo, futhi aselahle ithemba.
Kuzokhumbuleka ukuthi owayekhulumela yena uMengameli, uKhusela Diko, wamiswa isikhathi eside ephenyelwa inkohkalo, nokutholakale ukuthi cha icala abhekene nalo elokuhluleka ukuphumela obala ngokubandakanyeka komyeni wakhe ongasekho kumathenda kuhulumeni.
Muva nje kuphume umbiko kwelinye lamaphephandaba oveza ukuthi omunye wosomabhizinisi kwababeseke uRamaphosa emkhankasweni wakhe wokuhola iANC ngo-2017, uhlomule ngeTender lika-R1.5 billion kaEskom.
Kanti kusukela kwabheduka iCOVID-19, uhulumeni usolwa ngokungaphathi ngendlela izimali zokulwa nalolubhubhane, nokwaholela ekutheni kwesule esikhundleni owayengungqongqoshe wezempilo uZweli Mkhize.
Ngenyanga eyedlule kubulawe obeyisikhulu somnyango wezempilo eGauteng nobengufakazi wombuso Babita Deokaran.